တခါတလေတွေးမိတယ် ဆန်းကျယ်တဲ့စိတ်သဘောများ ၊၊ ကိုယ်လည်းလက်ကမ်းလို့မမှီနိုင်ပါဘူးလေ ၊၊ လူတစ်ခု စိတ်ကိုးဆယ်တဲ့ မှန်လိုက်တာ ၊၊ တခါတလေလည်း တကယ်ပါ လူတွေ ကို ဥပေက္ခာပြုနိုင်တဲ့ စိတ်မျိုး လေးပိုင်ဆိုင်မိချင်ရဲ့ ၊၊ စာတွေလည်းဖတ်နေတာပါပဲ ၊၊ တရားဆိုတာတွေလည်းနာကြားနေတာပါပဲ ၊၊ ဒါပေမယ့် သူဖန်ဆင်းတဲ့ လမ်းထဲလျှောက်လှမ်းနေမိဆဲ ၊၊ သူဖန်ဆင်းတဲ့ လမ်း လျှောက်လှမ်း နေမိတယ် ဆိုတာက သူ တကာ တွေ ရဲ့ ဝေဖန်မှုတွေ ချီးမွှမ်းမှုတွေ ကဲ့ရဲ့မှုတွေ စတဲ့စတဲ့ စကားလုံးတွေ ခင်းတဲ့ လမ်းပေါ့ ၊၊ မလျှောက် သင့်မှန်းသိပေမယ့် လျှောက်လှမ်းနေမိဆဲ ပါတကားလို့ ဘာသာ ရေရွှတ်ရင် ဆက်လျှောက်နေဆဲပေါ့ ၊၊
အခုရက်ပိုင်းမှာ အင်းတိတိကျကျ ဆိုရရင် လွန်ခဲ့တဲ့လပိုင်းက စပြီးကိုယ်သာမဟုတ်ဘဲ ဒီလမ်းလေးကို လျှောက် နေတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ လည်းတွေ့မိသား ၊၊ သူဘာပြောပြော ကိုယ့်အသားပဲ့ပါတာမှတ်လို့ ဆိုတဲ့ စကားပြောရ လွယ်ပေမယ့် တကယ်လက်တွေ့  ကျင့်သုံးဖို့တော့ ဖြစ်နိုင်ပြန်ဘူး ၊၊ အင်း ခက်တဲ့လူတွေနော် ၊၊ မကျေနပ်တဲ့ သူတွေကလည်း သူတို့ မကျေနပ်တာ ပြကြသလို တဖက်ကလူကလည်း ခံစားနေပြန်ရော ၊၊ အင်း တကယ်ကို အနုပညာရှုင်တွေကို လေးစားမိလာတယ် ၊၊ ဘယ်လိုများလှုပ်ရှားရပ်တည် အသက်ရှင်နေသလဲရယ်လို့ ၊၊ ဘာလို့ လည်းဆိုတော့ ကိုယ်တွေများ ခံစားနေလိုက်တာ စကားလုံးတွေကို တစ်လုံးချင်းကို ခံစားလို့ပေါ့ ၊၊ ပြောလာသမျှ ကို အလကားပဲတင်း တစ်ပြားမှ မရပဲ ခံစားနေလိုက်တာများ တခါတလေ ထမင်းစားတောင် တကယ်ပျက် မိပါ တယ် ၊၊ အလုပ်တွေတောင် ပျက်မိပါတယ် ၊၊ စိတ်တွေလည်း ရှုပ်မိပါတယ် ၊၊ မိတ်တွေလည်း ပျက်ရပါတယ် ၊၊
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကပြောဖူးတယ် ၊၊ ကျွန်တော့်အရင်းနှီးဆုံးသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ပါ ၊၊ သူပဲ ဘလော့ ရေးပါလားဆိုပြီး တိုက်တွန်းအားပေးခဲ့တာ ပါ ၊၊ သူကပြောတယ် နင်စိတ်ညစ်တာတွေ ပြေပျောက်ဖို့ နင်ရေးချင် တာတွေ ရေးဖို့ စိတ်အပန်းဖြေဖို့ေ၇းတာ နင်ဒီလိုသာ စိတ်ညစ်နေရရင် ဘာလုပ်မှာလဲ မတန်ဘူး မရေးနဲ့တော့ တဲ့ ၊၊ အင်းသူပြောတာလည်းမှန်ပါတယ် ၊၊ မှန်လိုက်တာ ၊၊ သို့သော်လည်း ရေးနေမိဆဲ ၊၊
အရင်းနှီးဆုံးပါလို့ပြောရမယ့် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့လည်း မိတ်ပျက်ဖူးတယ် ၊၊ ဘလောဂါ သူငယ်ချင်းတစ် ယောက် ပေါ့ ၊၊ အင်းနာမည်ကြီးဘလော့ဂါကြီးတစ်ယောက် ၊၊ နောက် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့လည်း စကား အခြေအတင် ပြောခဲ့ရဖူးတယ် ၊၊ ကျောင်းကတည်းက အတူတက်လာတဲ့ တကယ့် သူငယ်ချင်း ၊၊ ကိုယ်ယုံကြည် ရာတင်ပြကြတဲ့အခါ မတူညီတဲ့ အမြင်ရှုထောင့်တွေ ကြောင့်ပေါ့ ၊၊ ကိုယ်လည်း ကိုယ်မြင်တာကို တင်ပြသလို သူလည်း သူထင်တာကို ဝေဖန်ပေါ့ ၊၊ အင်းအမှန်တရားဆိုတာ တစ်ခုတည်းရှိတယ် ဆိုပေမယ့် အဲဒီအမှန်တရား ကိုမရောက်ခင် ကြုံတွေ့ရတာက သူအမြင်ကိုယ့်အမြင်ပေါ့ ၊၊ ကိုယ်ရပ်တည်ရာ Standing Point မတူတဲ့အခါ ကိုယ်ကျင်လည်ရာ Ground မတူတဲ့အခါ ဖြစ်တက်တဲ့သဘော ပါ ၊၊
အင်းအဲဒီလို သူငယ်ချင်းတွေ နဲ့ မိတ်ပျက်ဖူးသလို ကိုယ်မမြင်ဖူးတဲ့ သူငယ်ချင်း အသစ်တွေလည်း ရခဲ့ပါတယ် ၊၊ တကယ်ကို ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လာဖတ်ပြီး သူငယ်ချင်းဖြစ်နေတဲ့သူတွေ ရှိတယ် ကျေးဇူးလည်းတင်တယ် ၊၊ အဲဒါ ကိုတော့ အမြတ်လို့ သဘောထားတယ် ၊၊ ခုနောက်ပိုင်းတော့ ကိုယ်လည်း သိပ်မလိုက်ဖြစ်တော့တာ အမှန် ၊၊ ကိုယ်ကိုတိုင်လည်း အထက်ကဆိုသလို အခုနောက်ပိုင်း အဲဒီလို ဖြစ်တာတွေ များလာတော့ တခုခု အလုပ်ခံ လိုက်ရ သလို တခုခု ဖြစ်သွားသလို ၀ုန်းဆို ကြောက် စိတ်တွေ ၀င်နေမိရဲ့ (ခံစားရတာကို တင်ပြတာနော်) ၊၊ ( FaceBook ဖက်ပြောင်းနေတာလည်းပါမယ်ထင်ပ ဟိုမှာကတော့ တကယ့်ကိုယ့်သိတဲ့ သူတွေချည်းဆိုတော့ ဓါတ်ပုံတွေ တင်လိုက် စာတွေ လိုက်ဖက်လိုက်ပေါ့ ) ၊၊ ကိုယ်ကို မသိပေမယ့် ဒီမှာ စာရေး ရတဲ့ ဖီလင်လေးကို သဘောကျတယ် ၊၊ ကိုယ်ရေးတဲ့ စာတွေက နုနုရွရွ ကဗျာအလှလေးတွေ မဟုတ်သလို ၊ ဖွဲ့ဖွဲ့နွဲ့နွဲ့ စာသွဲ့သွဲ့လေး တွေ လည်း မဟုတ်ပြန်ဘူး ၊၊ သုတပေးတဲ့ သတင်းဆောင်းပါးတွေလည်း မဟုတ်သလို ပညာပေးတဲ့ စာတမ်းတွေ လည်း မပါဘူး ၊၊ ကိုယ်ရေးချင်တာ ကိုယ် ခံစားရတာ ၊ ကိုယ့်စိတ်ထဲရှိတာတွေသာ တင်ဖြစ်တာမို့ ရေးချင်တာ ရေးတာတွေကို ဖတ်ချင်တဲ့အခါ လာဖတ်ပေါ့ ၊၊ အင်းဒီလိုပဲ သဘောထားပြီးတင်ချင်တာတွေလည်း စိတ်ပါတဲ့ အခါတော့ တင်ပါအုံးမယ် အင်းစိတ်မပါတဲ့အခါ အလည်မရောက်ဖြစ်တဲ့အခါလည်း နားလည်ပြီးသာ ခွင့်လွှတ်ပေးပါခင်ဗျာလို့ပဲ ................
( အခုဒီစာလေး ဒီလောက်ရဖို့ မနည်းစဉ်းစားပြီးမနည်းရိုက်ရတယ် ၊ အရင်တုန်းကဆို ပြောချင်တာတွေများ ရေးချင်တာတွေများ စာတွေများ တပျောင်းပျောင်းနဲ့ မနည်းကို ဘရိတ်အုပ်ရတယ် အော် စိတ်များနော်...)
... 1:10:00 AM
အော် ဘွ ဘွ ဘွ ဘဝ ကိုပြောတာ မြန်သွားလို့ အဲလိုဖြစ်သွားတယ်နော် ခွေးလွှတ် သိလား စိတ်မညစ်နဲ့နော် အားလုံး အဆင်ပြေသွားမှာ သိလား
26 October 2009 at 3:23 AM
အား ပေး စကားတော့ သိပ်မပြောတတ်ဘူးရယ် ဘာပြောရမှန်းတောင် မသိဘူး ပျော်ရွှင်ပါစေနော် ဘိုင် တာ့တာ
26 October 2009 at 3:25 AM
မအယ်လည်း ဘလော့ရေးတာ စိတ်သက်သာရာ ရလိုရကြောင်းကြောင့်ပဲ။တယောက်ယောက်နဲ့ပြောလိုက်ချင်တာ ဘလော့နဲ့ပြောတယ် ဆိုပါတော့။ သုတ ရသ ပညာပေး ဘာရယ် မှတော့ မဟုတ်ဘူး လေ။
ကိုယ် ရေးတာလေးတွေ လာဖတ်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကပဲ ကိုယ့် စကားပြောဖော်လို ဖြစ်နေတာ။
သူ့အမြင် ကိုယ့်အမြင် မတူတာနဲ့ သူငယ်ချင်းနဲ့ စိတ်ဝမ်းကွဲရတာ နှမြောစရာ ကောင်းပါတယ်။ တချိန်ချိန် မှာ ပြန် အစဉ်ပြေသွားမှာပါ။
ဒီလို ဘလော့ရေးရင် စိတ်ပင်ပန်းနေရရင်တော့ ဘယ်လာကောင်းမှာလဲ။
တချို့ကိစ္စတွေ ကျတော့လည်း နက်နက်နဲနဲ မခံစားတာ ကောင်းပါတယ်။
26 October 2009 at 3:54 AM
စာရေးကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာ...။ အမြင်မတူတဲ့ သူတွေကတော့ အခုလည်းရှိနေခဲ့သလို နောင်လည်းရှိနေဦးမှာပဲဆိုတာ သိခွင့်ရလိုက်ပါတယ်...။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဆက်ရေးပါဦးခင်ဗျာ...။ လာပြီး အားပေးနေပါ့မယ်...။
26 October 2009 at 7:23 AM
ကိုမင်းအိမ်ရေးထားသမျ အားလုံးနီးပါး ကြုံဖူးလို့ ကိုယ်ချင်းစာပီး ဖတ်သွားပါတယ်
26 October 2009 at 11:56 AM
ကိုမင်းအိမ်ရေ.. နည်းနည်းအလုပ်ရှုပ်နေတာရော နေမကောင်းတာ ရောပြီး. မရောက်တာကြာပြီ..။
ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်. ဘလော့ဆိုတာ ဒီလိုပဲပေါ့.. အမြင်မတူတာရှိမှာပဲ..
အစ်မလည်း အဲလိုပဲ တခါတခါ တွေးဖြစ်တယ်..။ ဘလော့ရေးတာ တကယ်တော့ ကိုယ့်ခံစားချက်လေးတွေ ကိုယ်အမြင်တွေ ဖလှယ်တာပါ။ ဒီထက်မပိုပါဘူး။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ လက်ဘက်ရည်ဆိုင်မှာ အုပ်စုလိုက်ဝိုင်းထိုင်ပြီး ဟိုရောက်ဒီရောက် စကားတွေပြောသလိုမျိုးပေါ့..။ အဲဒီထက် ပိုပြီး မပိုပါဘူးဆိုတာကို..ပါ။
တို့တွေဟာ စာရေးဆရာတွေ မဟုတ်သလို ပညာရှငိတွေလည်း မဟုတ်ဘူးလေ။ ခံစားချက်သက်သက်နဲ့ ရေးနေတာမိုလို့ အဲဒါကို လာလည်တဲ့ကိုယ့်မိတ်ဆွေစာနာ နားလည်ပေးရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲလို့..။
ဘလော့မှာ..ဖြစ်တတ်တာက ကိုယ်ပေးချင်တဲ့ ခံစားချက်အမြင်ကတစ်မျိုး၊ လာဖတ်သူအမြင်က တမျိုးဖြစ်တဲ့အခါ အဓိပ္ပါယ်ကောက်လွဲတတ်တယ်ပေါ့.
တကယ်တော့ အကောင်းဖက်ကလှည့်တွေးရရင် ဝေဖန်တဲ့သူက ကိုယ့်ကိုသိပ်မျှော်လင့်နေလို့ တမျိုးပြောရရင် ကိုယ့်အပေါ်သိပ်အထင်ကြီးနေလို့လည်း အတိုက်အခံလုပ်ကြည့်တာ ဖြစ်မှာပါကွာ..
ဒါကြောင့်အစ်မအထင်တော့ တအား သိပ်မခံစားစေချင်ဘူး.
ဝေဖန်ချက်တွေအပေါ်ကို သိပ်မခံစားပဲ အရင်လိုပဲ ပျော်ပျော်ရွင်ရွင်နေပါလို့..
26 October 2009 at 11:29 PM
မလျှောက် သင့်မှန်းသိပေမယ့် လျှောက်လှမ်းနေမိဆဲလမ်းတဲ့ ဒီစကားလေး အကြိုက်ဆုံးပဲ။
စာဆိုတာ ဖွဲ့နွဲ့မှုလှပမှုထက် ရိုးသားမှုက ပိုအရေးပါတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ကိုမင်းအိမ်ရဲ့ စာတွေမှာ ရိုးသားမှုကိုတွေ့နေရလို့ စာဖတ်သူတွေ ရှိနေတာပါ။ အားပေးမြဲပါ။
27 October 2009 at 12:06 AM
ဒါပေမဲ့ အဲဒီစိတ်ကြောင့်ဘဲ လောကဓံတွေနှင့် ကြုံတွေ့ခဲ့ကြရတာမဟုတ်လား။
စိတ်ညစ်စရာတွေကို ဆေးကြောပစ်ပြီး လန်းဆန်းလတ်ဆတ်တဲ့လေနုအေးလေးကို ရှူရှိုက်ကာ ကြည်နူးမှုတွေ အပြည့်ရပါစေဗျာ။
စိတ်ထဲရှိတာ ကိုယ်ခံစားရတာတွေကို ပိုစ့်အဖြစ်ပြောင်းပြီး ရေးသားလိုက်တာပဲ။ ဆက်သာရေး။ သူတပါးကို မထိခိုက်ရင် ပြီးတာပဲ။ မငုံတော့ ဒီလိုပဲ ခံယူတယ်။ ကိုယ် မျှဝေချင်တာက ရှိတယ်။ မရေးတတ်နေဘူး။ ဒီတော့ မရေးတတ်ရေးတတ်လေးနဲ့ ရေးနေရတယ်။
27 October 2009 at 2:54 PM